Toa Hiavaka ny Fifidianana Filoham-pirenena 2017 ao Frantsa, Inty no Antony: · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Marsa 2017 4:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, 繁體中文, čeština , Español, Ελληνικά, Português, русский, Deutsch, 简体中文, Français
Manamarina ny fihantsiana manoloana ireo rafitra politika mahazatra sy faniriana fiovana mafy ity fironana ity. Tomponandraikitra amin'ny fanadihadiana ao amin'ny departemantan'ny hevitra sy ny tetikadin'orinasa ao amin'ny Ifop i Jean-Philippe Dubrulle. Manazava ny antony mampiavaka ity fifidianana ity izy:
Ny fandresen'i Trump tany Etazonia, ny Brexit tany Grande-Bretagne, ny avy amin'ny farany havanana tany Hongria ary fiakarana ankapoben'ireo antoko mpambabo ny fon'ny vahoaka ao Eoropa, no fambara tena mivandravandra ny fandàvana ny fanatontoloana sy ny finiavana hiforitra anaty any amin'ny firenena maro. Mamelabelatra ny antony ikambanan‘ireo fironana ireo any amin'ny demokrasia tandrefana i Olivier Costa, talehin'ny fikarohana ao amin'ny CNRS sy ho an'ny Siansa Politika ao Bordeaux.
Herinandro vitsivitsy alohan'ny fifidianana, tsy misy amin'ireo nankafizina indrindra afaka niala tamin'ny fomba maharitra. Marine Le Pen no eo amin'ny lohan'ny fitsapankevitra nefa koa sady miatrika olana ara-pitsarana, indrindra ilay iray mikendry ny fampiasana mpanampy parlementera eoroperana maro, ny famatsiambolan'ny fampielezankeviny ho an'ny fifidianana solombavambahoaka ary ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2012 teo ambany fanampiana ara-bola avy amin'ny Rosiana na koa ny fanesorana ny zo maha-parlemantera eoropeanina azy noho ny ”fampielezana sary mahery setra”. Novoaboasin'ny haino aman-jery sosialy rehetra ny fandrahonana ara-pitsarana mitambesatra amin'i Fillon ary koa ireo fampanantenany hiala raha toa ka iharan'ny fanadihadiana ara-pitsaràna izy: